पोईल गएकी श्रीमतीको नागरिकता र विवाह दर्ता गर्न न्यायिक समितिको दवाव ! | नेपालबहस
पोईल गएकी श्रीमतीको नागरिकता र विवाह दर्ता गर्न न्यायिक समितिको दवाव !
जुन 5, 2019
बर्दिया । उमेरले भर्खर लाऊखाऊ जस्ता देखिएका एक युवा विगत एक वर्षदेखि निष्पक्ष न्यायका लागि दौडिरहेका छन । अझ त्यसमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीले दिने मानसिक यातनाले जीवन नै विरक्त लागेको छ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वार्ड न ७ का मनोज यादव निष्पक्ष न्यायका लागि तारिख धाउन व्यस्त छन ।
सामाजिक परम्परा अनुसार २०७० सालमा मनोज यादवले आफनै घर नजिकै सुक्की यादवसँग मागी विवाह गरेका थिए । विवाह भएको केहि महिनासम्म सहजै तरिकाले दैनिक जीवन चलिरहेको थियो । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको मनोज यादवको त्यस बेला विवाह गर्ने उमेर पनि भएको थिएन । त्यसो त सुक्की यादवको पनि उमेर पुगेको थिएन । उनीहरु दुवैले बालविवाह गरेका हुन, त्यो पनि सामाजिक परम्परा अनुुसार ।
विवाह भएको केहि वर्षपछि यादव दम्पतीको परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन भयो, छोरीको जन्म भएपछि पनि खुशी नै थिए । तर समय सधै एकनाशको हुदो रहेनछ ,गुलरिया नगरपालिका वार्ड ७ गुलरिया गाँउ जहाँबाट गुलरिया बजार पुग्न बढीमा पैदल हिडेपनि ५ मिनेट लाग्छ । दैनिक आफनो खेतमा काम गरेर छाक टार्ने यादव दम्पतिलाई नजिकैको बजारको चहल पहलले पनि छोएको थियो । तर आफुसँग एउटा सामान्य मोवाइल बाहेक अरु केहि नभएको बताउछन मनोज यादव ।
२०७४ साल असोज ९ गते सुक्की यादव आफनी छोरीलाई लगेर झारफुक गराएर आउछु भनि सोहि गाँउका जितेन्द्र यादवसँग भागेको भन्ने खबर सुनेपछि मनोज यादव छाङ्गाबाट खसे जस्तो भए । सोहि दिन बिहान माइत गई माईतीमा छोरीलाई राखेर सुक्की जितेन्द्रसँग टाप कसेकी रहेछिन । गाँउघरमा हल्ला भएपछि मनोजले वडा कार्यालय र नजिकै रहेको सशस्त्र प्रहरी सेनामुखमा निवेदन दिए । वडाले कुनै वास्ता गरेन तर प्रहरीले खोजतलास गरेपछि आफै सम्पर्कमा आएका जितेन्द्र र सुक्की , गाउका भद्र भलादमी र वडा सदस्यको रोहवरमा सवै जनालाई सगै राखेर कागज गराएर अब आइन्दा यस्तो कार्य नगर्ने भनेपछि पुरानै पति अर्थात मनोजसँग बस्ने भन्ने माइती पक्ष ,घर पक्ष साथै आगामी दिनमा यस्तो नगर्ने भनेर कागज गराइयो जितेन्द्रलाई । यति भैसकेपछि पनि सुक्कीलाई स्वीकार गरेर घरमा पुुन भित्रयाएका थिए मनोजले ।
तरपनि मनोजका लागि त्यो समय धेरै टिक्क सकेन । यसरी भएको सहमतिलाई लत्याउदै सुक्की पुन जितेन्द्रसग भागेपछि फेरि समस्या आइलाग्यो । फेरी प्रहरीले दुवैलाई झिकाएर भद्र भलादमी बसालेर छलफल गरायो २०७४ साल असोज ३१ गते । छलफलमा वडा सदस्य पनि सहभागी भए । छलफलको निचोडमा सुक्कीलाई उनका मामाले आफनो घर लगे , ५ देखि ६ महिनासम्म सुक्की घर गइनन, छोरी मनोज सगै थिइन । उता जितेन्द्रका आफन्तले उनको विवाह गरिदिए । केहि समयपछि सुक्कीले स्थानिय गुलरिया नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितीमा निवेदन दिइन ।
निवेदनमा विवाह दर्ता र नागरिकता बनाइदिनु पर्रो भन्दै उजुरी दिएपछि मनोजलाई फेरि संकट आइपर्यो । उनले पनि अडान लिए, आफनो नामबाट नबनाइदिने विवाह दर्ता पनि नगर्ने । यति भैसकेपछि न्यायिक समितिले मनोजलाई पत्र काटयो तुरुन्त नगरपालिका आउनु भनेर । न्यायिक समितिमा न्याय दिनका लागि तम्तयार रहेका उप प्रमुख सुशीला गिरीले आफुलाई धम्क्याएको मनोजले बताए । उनका अनुसार आफना वुवा मालती यादव र आफुलाई बोलाएर सुक्कीको पहिले विवाह दर्ता गराउने त्यसपछि नागरिकता बनाउने यो कार्य नगरे जेलमा थुनिदिने धम्की दिएको उनले बताए । त्यति मात्र हैन, तिम्रो नाममा रहेको सम्पत्ति पनि सवै सुक्कीको नाममा गरिदिने भनेपछि मनोज चिन्तामा छन । सम्पतिको नाममा मनोजँंग अंश वन्डावापत पाएको ३ कठठा मात्र जमिन छ ।
मनोजले विगतमा भएका सहमतीका कागजात देखाउदा पनि यसको कुनै मतलव नभएको भन्दै न्यायिक समितिले वेवास्ता गरेको उनको भनाई छ । सुक्कीका आफन्तले सुक्की मनोजसँंग नबस्ने तर विवाह दर्ता र नागरिकता बनाइदिनु पर्ने बताउदै आएका छन । उनीहरुका अनुसार सुक्की पाेइल गैसकेपछि मनोजले मानसिक यातना दिने गरेको आराेप लगाएका छन ।
उता न्यायिक समितिका संयोजक एव उप मेयर सुशिला गिरीले आफु कहाँ त्यो केस आएको बताउदै जो कसैलाई पनि यो पार्टी वा त्यो पार्टीको दृष्टिकोणले नहेरेको बताउदै आफुहरुले मिलाउने प्रयास गर्ने सम्भव नभए प्रहरी वा अदालतमा पठाउने बताईन् । साथै उनले मनोजलाई कुनै किसिमको डर नदेखाएको दावी गरिन ।
समाचारमा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन खोजिएको हैन तर न्यायिक समितिको काम के र कसरी भन्ने प्रश्न उठाउन खोजिएको हो । सुक्की अहिले माईतीमा छिन , छोरी घरमा छिन । मनोज न्यायका लागि दौडिरहेका छन त्यसमा न्याय अन्याय छुटयाउने निकायले दुवै पक्षलाई राखेर निष्पक्ष तरिकाले दुवै पक्षको जित हुने हितमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब यो केस कहाँ गएर टुंगिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अघिल्लो लेखपेट्रोलको मुल्य घट्यो !
अर्को लेखनेपाल प्रहरी अपडेट : नक्कली नेपाली नोट र अवैध चाँदीका गहनासहित ३ जना पक्राउ